दर्शकको माया र परिवारको साथ पाएर यो स्थानमा पुगेँ : क्याप्टेन नबिता श्रेष्ठ | दर्पण दैनिक
दर्शकको माया र परिवारको साथ पाएर यो स्थानमा पुगेँ : क्याप्टेन नबिता श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति: २०७६ पुष २८ गते १०:१४
सानैदेखि खेलक्षेत्रमा रुची राख्ने नबिता श्रेष्ठ अहिले टेबुल टेनिस खेलको राष्ट्रिय कप्तान छिन् । खेलकुद क्षेत्रमा नै डेढ दशक बिताईसकेकी श्रेष्ठसँग टेबल टेनिसको विषयमा लामो अनुभव छ । ती अनुभवहरुमध्य कति रमाईला त कति नरमाईला क्षेणहरु छन । उनी यो खेलको महिलातर्फ विश्वको तीन सय र्याङ्किमा पर्दछिन् । भर्खरै नेपालमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली खेल (साग) मा यो खेलले पनि निकै सफलता हाँसिल ग¥यो । प्रस्तुत छ टेबल टेनिसकी क्याप्टेन नबिता श्रेष्ठसँग दर्पण दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) कस्तो रह्यो ?
सागको खेल हुनु भन्दा एकदुई हप्ता अगाडीसम्म पनि साग हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्यौलमा थियो । किनभने प्राविधिक विषय, धेरै खेलहरु लगायत हरेक विषयले गर्दा सागको विषय अन्यौल परेको थियो । तर साग सम्पन्न भयो । पहिलाभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भयौँ । समग्रमा साग राम्रो भयो ।
सागमा महिला लिडरको तर्फबाट भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
लिडरको हिसाबले कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला आफु नै आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । त्यसपछि खेलाडीहरुलाई मोटिभेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अनि पहिला भन्दा कसरी अझ राम्रो गर्ने तथा देशलाई कसरी अगाडी बढाउने र देशको नाम कसरी राख्ने भन्नेमा चिन्ता हुन्छ ।
ठुला तथा विकसित देशहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, कस्तो महशुस भयो ?
साउथ एसियाको भारत निकै ठुलो देश हो । अझ त्यो भन्दा शक्तिशाली राष्ट्र चीन, जापान सँग पनि खेल्यौ । त्यसकारण भारत भन्ने वित्तिकै हामी आत्तिएनौ । अब भारतलाई पनि के अनुभव भयो भने नेपाललाई सजिलै हेरियो भने हामी पछि पछौँ भन्ने बनउन सक्यौँ ।
घरेलु मैदानमै भएको खेलमा पनि केहि खेलहरुमा पराजित हुनुपर्दा कस्तो महशुस गर्नुभयो ?
त्यो त अति नमजा हुन्छ । यसपाली त अझ जित्ने खेल पनि हारेका छौँ । त्यसले गर्दा यो खेलमा जति हुनुपर्ने सन्तुष्टि थियो, त्यो हुन सकेका छैनौँ । हाम्रै देशमा खेल भएकोले सबै अभिभावक, अन्य खेलप्रेमीको अगाडी पराजित हुँदा धेरै नरमाईलो चाँही हुदोरहेछ । तर पहिला भन्दा राम्रो गरेका छौँ । सबैको साथसहयोग छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा कुनकुन टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो ?
यसपटकको सागको खेलमा श्रीलङ्का, भारत र बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा ग¥यौँ ।
टेबुल टेनिस खेल के हो ?
टेबुल टेनिस अरु खेलभन्दा फरक खेल हो । जस्तै, शारीरिक तन्दुरुस्त हुनुपर्छ, मानसिक तिब्रता साथै माईक्रो सेकेन्डमा नै बल कहाँ हान्ने लगायत निष्कर्ष हुनुपर्छ । त्यसकारण शारीरिक फिटनेश र मानसिक फिटनेशका कम्बाईनेशन हुनु जरुरी छ ।
यस खेलमा नयाँ पुस्ताको लगाव कस्तो छ ?
लगाव त धेरै नै छ । मलाई लाग्छ काठमाडौँ उपत्यकामा टेबुल टेनिस जस्तो लोकप्रिये खेल अरु छैन होला । किनकि यहाँ ४÷५ वर्षका बच्चाहरुदेखि सबै यो खेलमा आकर्षित छन् । ७ वर्षका बच्चाहरु त विभिन्न ठाँउमा प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि टेबुल टेनिसमा सबैको लगाव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाँईलाई पारिवारिक साथसहयोग कस्तो छ ?
खेलाडीलाई मात्र होईन हरेक मान्छेलाई पारिवारिक साथसहयोग चाहिन्छ । तर एउटा खेलाडीलाई अलि बढि साथ चाहिन्छ । किनकि टे«निङ गर्नुप¥योे, खेल्नु प¥यो, पढाई छ भने त्यता पनि ध्यान दिनुप¥यो साथै अन्य काम पनि गनुपर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा परिवारको साथ बढि चाहिन्छ ।
परिवारका सदस्यहरु पनि खेलमा आवद्ध हुनुहुन्छ कि ?
हुनुहुन्छ । मेरो श्रीमान् पहिलो कोच हुनुहुन्छ । मेरो दुईजना नन्दहरुपनि खेलाडी नै हुन् । म नम्बर एकमा छु । एउटा राष्ट्रिय खेलमा म नम्बर एक, माईली नन्द नम्बर दुई र कान्छी नन्द नम्बर तीन खलाडीमा थियौँ । यसरी परिवारका सदस्यहरु नै यो क्षेत्रमा हुँदा गर्व लाग्दो रहेछ । रमाईलो पनि हुन्छ ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कसरी आयो र खेल यात्रा कहिलेबाट सुरु गरियो ?
खेल्न चाँहि बच्चा देखि नै खेलिन्थ्यो । तर कक्षा ८ बाट चाँहि केहि बन्छु केहि गर्छु भनेर सुरु गरियो । बच्चा देखि नै मेरो खेल क्षेत्रमा रुचि थियो । यसकारण म आफैमा उत्प्रेरणा थियो । पछि यो ठाँउसम्म आउनका लागि चाँहि मेरो श्रीमान्ले नै साथ दिनुभएको हो । अहिले हामी र हाम्रो परिवार सबै जना खुसि हुनुहुन्छ । सबैको साथसहयोग पुर्ण रुपमा छ ।
यो खेलका समस्या र चुनौतिहरु केके छन् ?
यो खेलमा मात्र होईन, प्रत्येक खेलमा समस्याहरु छन् । राज्य नै खेल क्षेत्रप्रति बलियो र बफादार छैन भने खेलाडीले मात्र के गर्न सक्छ र ? टेबुल टेनिसको सन्र्दभमा हेर्दा पनि त्यस्तै छ । आर्थिक लगानीदेखि हरेक समस्या भएकाले गर्दा यो खेल पनि अलि पछाडी नै छ । तर पनि यो खेल अरु खेलमा भन्दा अलि राम्रो छ । किनकि हाम्रो आफ्नै हल छ, खेलसामग्रीहरु छन् । क्लब, प्रत्येक स्कुलहरुमा टेबुल टेनिस खेलको सुविधा छ, त्यहाँ नै कोचिङ गरेर पनि आयस्रोतको माध्यम बनाएको छ । त्यसकारण, पेट पाल्नकै लागि भनेर यो क्षेत्रबाट बाहिरिनु पर्ने वा पलायन हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
खेलक्षेत्रको विकासका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
बच्चाहरुमा नै यसको छाप पार्ने वातावरण सरकारले सृजना गर्नुपर्छ । जस्तो कुनै पनि बच्चालाई भविष्यमा के बन्ने भन्ने प्रश्न गरियो भने उसले भन्छ म डाक्टर बन्ने वा ईन्जिनियर बन्छु भन्ने जवाफ आँउछ । किन बन्ने भन्ने प्रश्न गरिदैँन, किनकि त्यस क्षेत्रमा ईज्जत र आर्थिक दुवै उच्च हुन्छ । तर खेल क्षेत्रमा यी दुवै कुरा कम छ । त्यसकारण पनि सरकारले यो विषयमा ध्यान दिने हो भने समग्र खेल क्षेत्र माथी आउँछ । यसको फाईदा राष्ट्रलाई नै हुन्छ । नेपालको संस्कृति खेलको माध्यमबाट अन्य देशमा आदन–प्रदान हुन्छ । अझ भनौँ खेल के हो भन्ने कुरा बच्चाहरुलाई सरकारले राम्रोसँग बुझाउन सकियो भने अवश्य पनि यो क्षेत्र माथी उठ्न सक्छ ।
यस क्षेत्रमा लागेर भएका अविस्मरणिय क्षेणहरु ?
सबैभन्दा खुसिको क्षेण भनेको म नेशनल च्याम्पियन बन्दाखेरी भएकी थिएँ । किनकि म त्यति छिट्टै नेशनल च्याम्पियन बन्छु भन्ने लागेको थिएन । म योङ्ग उमेरमै नेशनल च्पाम्पियन बन्न सफल भएँ । अहिलेसम्म नेपाली महिला टेबुल टेनिस खेलमा वल्र्ड ¥याङ्किग पनि राम्रो छ । । ईन्डोनेशियामा भएको खेलमा चाईनालाई जित्यौँ । त्यो क्षेण पनि अविस्मरणिय थियो । किनकि विकसित देश र बच्चै देखि यो क्षेत्रमा लागेर केहि गर्छु भन्ने देशलाई पराजित गर्नु चानचुने विषय थिएन । हुन त दुखका दिनहरु पनि छन् । कुनै खेल दुईवटा जित्दा पनि मेटल हात पार्न सकेनौँ, त्यो क्षेण मेरा लागि दुखको क्षेण थियो । यहि क्षेत्रमा १४÷१५ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खेलहरु खेलेँ । कहिले विजय कहिले पराजय त भईहाल्छ । त्यसका बाबजुद पनि हङकङ, चाईना, जापान, मकाउ, बंगलादेश आदि देशहरुलाई जितेका छौँ । फिमेल ईयर अफ द पिलेयरमा पनि नोमिनेट भएको छु । त्यहि भएर होला मेरो वल्र्ड र्याङ्किग तीन सय सम्म पनि आएको छ ।
खेलाडी भएर यो स्थान हाँसिल गर्दा तपाँई के भन्नुहुन्छ ?
मेरो बुवा आमाले यहि बनाउछु भन्ने नभए पनि खेल क्षेत्रमा नै अगाडी बढेको देख्न चाहानुहन्थ्यो । त्यहि भएर होला मेरो बुवाले मलाई तेकन्दोमा हाली दिनु भएको थियो । तर तीन चार वर्ष टेकन्दो खेलिसकेपछि म टेबुल टेनिस खेल्छु भन्दा सायद मेरो बुवा दुखमा हुनुहुन्थ्यो । पछिसम्म पनि यहि कारण सम्बन्ध टाढा भएको थियो । तर जब मैले यो खेलमा राम्रो गर्दै गएँ तब बुवाले पनि मलाई बुझ्दै जानुभयो । मैले मेरो बुवाआमालाई दुखी बनाउने काम कहिल्यै पनि गरेकी छैन ।
सिनियर महिला खेलाडी भएको नाताले नव खेलाकडीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको समयमा खेल भनेको अति महत्वपूर्ण छ । शिक्षा मात्र दिएर हुँदैन । घोकन्ते विद्याले मात्र पुग्दैन । २४ सै घण्टा पढिरहने बच्चा र एउटा खेलक्षेत्रमा लागेको व्यक्तिमा दाँज्ने हो भने पनि खेलाडीकै बढि कन्फिडेन्स देखिन्छ । त्यहि भएर म बच्चहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने शिक्षामात्र होईन, त्यो भन्दा बाहेक आफ्नो भविष्य बनाउने फरक क्रियाकलापहरु पनि गर्नुपर्छ । खेलक्षेत्रमा आवद्ध हुनुपर्छ । त्यो टेबुल टेनिसमात्र होईन जुनसुकै खेल भएपनि हुन्छ । यो क्षेत्रले फिटनेशका, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन लगायत हरेक कुराहरु सिकाउँछ ।